Naphezu kweqiniso lokuthi belyashi ne inyama, okuthosiwe epanini, kukhona okunama-kilojoule amaningi nokudla eziyingozi, lokhu dish kufana cishe yonke into. Phela, ukulungiselela ngokushesha futhi kalula, kanye uyasondla emthonjeni emzimbeni.
Ukuze ukulungiselela isidlo esihlwabusayo, okokuqala udinga ukuthi uxove imvubelo inhlama.
Belyashi nge inyama: Izithako for inhlama
ukuphuza amanzi - nendebe;
ubisi - isigamu inkomishi;
Ushukela - nezinkezo ezimbili ezincane;
Iqanda - ngento eyodwa;
usawoti - kwesigamu dessert nezinkezo;
ukudla - kuze inhlama obukhulu;
imvubelo - ezingaphezu kwesigamu spoon encane.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukungeza imajarini is hhayi Kunconywa kulesi inhlama, njengoba belyashi ne inyama, okuthosiwe emafutheni zemifino, ngakho kuyoba ngokugqamile.
Inqubo kulungiselelwa isivivinyo:
Ukuze isidlo sakho Kwatholakala a aluhlaza, okumnandi futhi enhle, kubaluleke kakhulu ukuba xova imvubelo inhlama. Phela, uma akukuhle ngokwanele ukuba basukume ke wena engozini hhayi okuthosiwe ngokuphelele futhi belyashi Limp.
Ukuze silungiselele inhlama exutshwa epanini ingilazi eyodwa amanzi okuphuza nge izinkomishi kwesigamu ubisi fresh. Ingxube kwaphumela kumele kube kancane afudumele, bese uthele emuva usawoti, ushukela kanye nemvubelo. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi zonke izithako elicibilikile ezigcwalise edingekayo ngempela ukulinda imizuzu cishe abangamashumi amabili. Khona-ke, lo supernatant mass kudingekile ukuba aphule iqanda elilodwa bese wengeza ufulawa. Inhlama kumele abe emaweni ngokwanele ukuze ngesikhathi ukubumba Tat awusebenzi unamathele ezandleni. Ngokulandelayo, kubalulekile ukuba amboze lid wafaka endaweni efudumele lapho iyolondeka khona kahle zigcwala.
Kuyaphawuleka ikakhulukazi ukuthi belyashi ne inyama, okuthosiwe epanini, ungakwazi ukupheka noma yiluphi uhlobo inyama. Kodwa ungathathi ukugxusha okunamafutha kakhulu, ngoba kakade ayovulelwa emafutheni.
izithako Kunconywa lo ukugxusha:
yenkomo mafutha - 200 amagremu;
yengulube mafutha - 200 amagremu;
anyanisi - amakhanda ezintathu;
Leek - ugodo;
pepper - 1/3 dessert spoon;
Belyashi ne inyama, okuthosiwe epanini: inqubo ukwakheka
Uma isisekelo ukudla bayovuka kanye ukugxusha usulungile ngokuphelele, ungakwazi ngokuphepha uqhubekele babumba futhi yokuwugazinga esiphundu Tat. Ukuze wenze lokhu, thatha inani elincane inhlama (ububanzi ibhola 5-6 cm), Roll it kancane bese efakwa phakathi isipuni encane inyama nengulube. Inyama Kunconywa ukuba kancane uxove. Ixhuma imiphetho inhlama kufanele akha Belyashov ezincanyana ngenkathi beshiya ukuvulwa encane.
Lapho yonke imikhiqizo Semi-siphelile uzolunga, kufanele nokushisa up epanini ukuthosa, okwenezela 150 namamililitha samafutha zemifino. Khona-ke ungakwazi uqhubekele isidlo yokuwugazinga. Kuyaphawuleka ukuthi lapho baba belyashi ku izitsha osuke usushisa kakade kudingeka imbobo phezulu. Uma, ngesikhathi lamafutha okupheka igelezela kuzo inyama umhluzi, pan ungavala kafushane isivalo. Fry yonke imikhiqizo, basuke Kunconywa ukuba ngokushesha kusebenza etafuleni nge utamatisi fresh futhi basil sauce.
Ngakho, uzothola inyama kamnandi kakhulu futhi okumnandi belyashi. Photo of the dish isiqediwe futhi eyenzeka kancane kancane sokulungiselela yayo ingatholakala cishe noma iyiphi incwadi yokupheka.
Mackerel e ambalwa multivarka - esihlwabusayo isidlo enempilo
Utamatisi Green ngaphansi ikhava inayiloni - ukupheka zokupheka
Halva tahina: dessert Eastern etafuleni lakho
Kuyini irayisi uviniga?
Ukutshala garlic ekwindla: isikhathi, ukulungiselela umhlabathi
Indlela ukupheka ulwe epanini ukuthosa: iresiphi ngesithombe
Isicelo izingane ngephepha nobumba
Strudel okumnandi ne cherry